Mogadishu Journal » Kalfadhigii 7 aad ee baarlamaanka oo maanta soo xirmaya
Mjournal :–Waxaa lagu waddaa in maanta uu si rasmi ah u soo xirmo kalfadhigii 7 aad ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo xildhibannaduna gali doonaan fasax muddo kooban ah.
Kulan maanta uu yeellanayo baarlamaanka ayaa lagu soo bandhigi doonaa war murtiyeed ku saabsan kulamadii Amniga ee uu Baarlamaanka su’aalaha ku weydiinayay Ra’iisul Wasaaraha, Wasiirka Amniga iyo Taliyaha Nabadsugida.
Sidoo kale waxaa kulanka maanta hor-tagi doona baarlamaanka Wasiiro ka tirsan Xukuumadda oo iyana su’aalo laga weydiin doono waxqabadkooda.
Wararka qaar ayaa sheegaya in laga yaabo in kalfadhiga maanta uu soo xiro Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Ugu danbeyntii, baarlamaanka Federaalka oo u harsan muddo shan bilood ayaa marka uu fasaxa ka soo laabto waxaa uu u furmi doona kalfadhigiisa 8aad, kaasoo noqon doona kii ugu dambeeyay, iyadoo marka la gaaro Bisha Agosto la rajeynayo in la soo dhiso Baarlamaan cusub.
Ciidammada Itoobiya oo qaraxyo lagula eegtay degmada Baardheere ee gobolka Gedo
Madaxweyne Xassan Sheekh” waan in lala shaqeeyaa laamaha ammniga